७ दशकको बीमा बजार : बीमा सेवामा प्रविधि भित्र्याउने प्रयास | गृहपृष्ठ
Home समाचार ७ दशकको बीमा बजार : बीमा सेवामा प्रविधि भित्र्याउने प्रयास
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६ समाचार
७ दशकको बीमा बजार : बीमा सेवामा प्रविधि भित्र्याउने प्रयास
नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकभन्दा बढी भएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो, जसको नाम नाम हाल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी छ । यद्यपि उक्त कम्पनीले नेपाल बैंकसँग सम्बन्धी व्यवसायको मात्र बीमा गर्ने गरेको थियो । त्यसपछि विसं. २०२५ सम्म भारतीय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा आएर बीमा व्यवसाय गरेको इतिहास छ ।
जब २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो र २०२५ सालमा बीमा संस्थान ऐन आयो, त्यसपछि केही भारतीय बीमा कम्पनीहरू स्वदेश फर्किए भने केहीले सो ऐनअनुसार शाखा स्थापना गरे । यो अवधिमा भारतीय बीमा कम्पनीहरूले नेपाली समाजमा बीमासम्बन्धी जागरण ल्याउने काम गरे ।
विसं. २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुँदासम्म पाँचओटा मात्र बीमा कम्पनी थिए (राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरन्स एन्ड ट्रान्सपोर्टका साथै भारतीय दुई बीमा कम्पनीहरू नेशनल इन्स्योरेन्स तथा दी ओरिएन्टल जनरल इन्स्योरेन्स) ।
२०४७ सालपछि नेपाल सरकारले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको फलस्वरूप बीमाक्षेत्रमा पनि निजीस्तरका कम्पनी स्थापना भए । आज आइपुग्दा नेपालमा एक पुनर्बीमा, २० निर्जीवन र १९ जीवन बीमा कम्पनी कार्यरत छन् ।
तर अहिले बीमा बजार तीव्र रूपमा विस्तार हुन थालेको छ । साथै बीमा सेवामा उच्च प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले बीमाक्षेत्रको काम कारबाही छिटो–छरितो र सरल बनाएको छ । बीमा बजारमा प्रयोग भइरहेका केही उच्च प्रविधिबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ :
‘अनलाइन एजेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’
यो एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयर हो, जुन अभिकर्ताको इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित छ । यसलाई बीमा समिति र सबै बीमा कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएका छन् । पहिले अभिकर्ताको इजाजतपत्र तयार गर्न महीनौं लाग्थ्यो । यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएपछि अहिले १ हप्तामै अभिकर्ताको इजाजतपत्र तयार हुने गरेको छ । यद्यपि यस सफट्वरमा अहिले भने प्राविधिक समस्या आएका कारण अभिकर्ताको लाइसेन्स तयार गर्न समय लाग्ने गरेको छ । उक्त सफ्टवेयरमार्फत नै कम्पनीले आवश्यक कागजपत्र समितिमा पेश गर्न सक्छन् । सफ्टवेयरबाट प्राप्त कागजपत्रको आधारमा समितिले अभिकर्ताको इजाजतपत्र तयार गर्दछ ।
जीवन बीमा कम्पनी : आन्तरिक प्रयोजनमा दुई सफ्टवेयर
हाल नेपालमा १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको आन्तरिक प्रयोजनका अहिले दुईभन्दा बढी सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छन्, जसमा आईसोलुशन लाइफ र सिद्धि लाइफ प्रमुख छन् ।
सिटिजन, प्रभु, महालक्ष्मी लगायत ९ जीवन बीमा कम्पनीले आईसोलुशन लाइफ प्रयोग गरेका छन् । यस्तै युनियन, नेशनल लाइफ लगायत ६ कम्पनीले सिद्धि लाइफ प्रयोग गरेका छन् । यी सफ्टवेयरमार्फत कम्पनीको अन्डरराइटिङ लगायत आन्तरिक काम गर्न सकिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी : आन्तरिक प्रयोजनमा दुई सफ्टवेयर
हाल नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले पनि आन्तरिक प्रयोजनका लागि दुईभन्दा बढी सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका छन्, जसमा इन्स्योरप्लस र गाप्स्को प्रमुख छन् । इन्स्योरप्लस १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै तीन कम्पनीले गाप्स्को प्रयोग गरेको पाइन्छ । यी सफ्टवेयरमार्फत कम्पनीको अन्डरराइटिङ लगायत आन्तरिक काम गर्न सकिन्छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स सिस्टम
यो सफ्टवेयर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि बनाइएको हो । कम्पनीले यही सटवेयरमार्फत नै आफ्नो आन्तरिक काम गर्दै आएको छ । साथै कम्पनीले गत वैशाख २० गतेदेखि कारोबारमा सहयोग हुनेगरी वेबबेस सफ्टेवयर पनि प्रचलनमा ल्याएको छ ।
नेपालका सबैजसो बीमा कम्पनीले मोबाइल इन्स्योरेन्स प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसमा कम्पनीको छुट्टाछुट्टै मोबाइल एप्स हुन्छ । उक्त एप्समार्फत आम व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीले दिने सेवा सुविधाबारे बुझन् सक्छन् । साथै बीमितले एप्समार्फत आफूले तिरेको बीमाशुल्क, बीमाशुल्क तिर्ने मिति, बाँकी बीमाअवधि लगायत थप सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् ।
हाल मोबाइल एप्समार्फत कुनै पनि व्यक्तिले बीमा योजना खरीद गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले सन नेपाल लाइफले यसको परीक्षण गरिरहेको छ ।
नेपालमा अनलाइन इस्योरेन्सको अभ्यास भर्खर मात्र शुरू गरिँदै छ । अहिले सगरमाथा इन्स्यारेन्स, प्रभु लाइफ लगायत इस्योरेन्स कम्पनीले यसको परीक्षण गरिरहेका छन् । यसमार्फत कुनै पनि व्यक्ति आफैले (एजेन्टको सहयोगविना) बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्छन् । बीमाशुल्क भने ईपेमेन्ट तथा बैंकिङ सिस्टमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमासेवामा भाइबरको प्रयोग पनि हुन थालेको छ । यसमा कम्पनीपिच्छे फरक फरक सफ्टवेयर हुन्छ, तर सबैको आधार भाइबर नै हुन्छ । भाइबर प्रयोगकर्ताले यसमार्फत सम्बन्धित कम्पनी र निरन्तर सोधिने प्रश्नबारे विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्छन् । साथै सम्बन्धित कम्पनीको पोलिसी होल्डरले बीमालेख एक्टिभ भएको सूचना, पोलिसी इन्फर्मेशन, प्रिमियम इन्क्वाइरी, प्रिमियम हिस्ट्री लगायत थप सुविधा पाउन सक्छन् । हाल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
च्याटबटको प्रयोग नेपाली बीमा बजारका लागि नयाँ हो । हाल दर्शन टेकले यससम्बन्धी काम गरिरहेको छ । यसमा पनि कम्पनीपिच्छे फरक फरक सफ्टवेयर हुन्छ, तर यसको आधार च्याटबट नै हुन्छ । आम मानिसले च्याटबटमार्फत सम्बन्धित कम्पनी र उसका सेवा सुविधाबारे कुराकानी गर्न सक्छन् । उक्त सफ्टवेयरमा कम्पनीको व्यक्तिले नभएर सिस्टमले नै कुरा गरिरहेको हुन्छ । हाल सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले च्याटबटको परीक्षण गरिरहेको छ ।
बैंकासुरेन्स पनि अटोमेटेड
अहिले नेपालमा बैंकासुरेन्सको बजार फस्टाउँदै गएको छ । तर यसको कार्यशैली भने परम्परागत रूपमै अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यसैले यसलाई पनि एटोमेट गर्ने तयारी दर्शन टेकले गरिरहेको छ । यद्यपि नबिल बैंकले भने बैंकासुरेन्सलाई एटोमेट गरिसकेको छ । यस्तो प्रविधिमार्फत बीमा पोलिसी जारी गर्न ‘मानवीय’ जनशक्ति आवश्यक पर्दैन ।
आउँदै गरेका प्रविधि
इन्स्योरेन्स विथ सेल्फी
दर्शन टेकले यस्तो प्रविधिको विकास गर्दै छ । यसबाट बीमा गर्ने व्यक्तिको अनुहारको फोटो खिचेर निजको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सकिन्छ । सोहीअनुसार बीमाशुल्क निर्धारण गरेर बीमा सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
मानिसको व्यवहारको आधारमा बीमा
दर्शन टेकले मानिसको व्यक्तिगत व्यवहारअनुुसार बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने प्रविधिको विकास गर्दै छ । उक्त प्रविधिमार्फत मानिसको व्यक्तिगत व्यवहारको आधारमा हुन सक्ने जोखिम पत्ता लगाउन सकिने बताइएको छ । उक्त सम्भावित जोखिमअनुसार नै बीमाशुल्क निर्धारण गर्न सकिने दर्शन टेकका अध्यक्ष खुशल रेग्मीले जानकारी दिए । चुरोट सेवन गर्ने व्यक्ति र चुरोट सेवन नगर्ने व्यक्तिको एउटै प्रकृतिको बीमा गर्दा फरक फरक बीमाशुल्क निर्धारण गर्न यसबाट सकिन्छ ।
दाबी प्रक्रिया पनि अटोमेटेड
यस्तै, नेपालमा बीमा दाबी प्रक्रिया पनि अटोमेटेड हुने सम्भावना छ । दर्शन टेकले नै यस प्रकारको प्रविधिको विकास गर्दै छ । कुनै कार दुर्घटनामा परेमा उक्त प्रविधिमार्फत बीमा गरिएको सम्बन्धित कम्पनीमा स्वतः जानकारी पुग्छ । साथै घर बीमा र स्वास्थ्य बीमाको दाबी पनि एटोमेटेड गर्न सकिने बताइएको छ ।
प्रायः मानिसले अझै पनि बीमालाई राम्रोसँग बुझेका छैनन् । यो अवस्थामा बीमासम्बन्धी प्रविधिको विस्तारमा अवश्य नै चुनौती हुन्छ । साथै नेपालीहरूमा प्रविधिलाई झ्याप्पै विश्वास गरिहाल्ने प्रवृत्ति पनि छैन । यस्तै प्रविधिले इन्टरनेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ, जसअनुसार प्रविधिको विस्तारका लािग इन्टरनेटको पनि विस्तार हुन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ५८ प्रतिशत रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको फागुनसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । पहुँच विस्तार भएका सबै ठाउँमा पनि इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय छैन । यस अवस्थामा बीमाक्षेत्रमा रहेका प्रविधिको विस्तारमा थप चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रस्तुति : मिलन विश्वकर्मा
बढ्दै छ बीमा बजार
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:४६
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०७:४०
प्रविधिमय बन्दै बीमा बजार
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार ०९:०७
१५ माघ २०७५, मंगलवार १५:०१